Pennsylvania ပြည်နယ် WIC | JPMA, Inc
သင်၏ WIC ဆေးခန်းကိုခေါ်ဆိုပါက…
တိုင်း WIC ချိန်းရန်သင့် eWIC ကဒ်ယူလာပါ။ သင်သည်သင်၏ကဒ်မေ့လျှင်သင်တို့ကိုအကျိုးခံစားခွင့်ရရန်ဆေးခန်းမှပြန်လာရပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာသင့်ရဲ့ PIN ကိုစောင့်မရှောက်ကြ။
သင်သည်သင်၏ကဒ်အသုံးပြုချင်ကြဘူးကြောင်းမည်သူမဆိုရန်သင့် PIN ကိုမပေးပါဘူး။
သင့်ရဲ့ကဒ်တင်နိုင်သို့မဟုတ်သင့်ကဒ်ပေါ်တွင် chip ကိုခြစ်ရာမပါနှင့်။
တစ်ဦးက PIN ကို (ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ခြင်းနံပါတ်) ဆိုတာဘာလဲ?
ဒါဟာသင့်ရဲ့အစားအစာကိုအကျိုးခံစားခွင့်ကိုဝင်ရောက်ဖို့သင့် eWIC ကဒ်နှင့်အတူသုံးပါလိမ့်မယ်တဲ့ဂဏန်းလေးလုံးလျှို့ဝှက်ချက်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပင်နံပါတ်တစ်ခုကိုရွေးသောအခါသင်မှတ်မိရန်လွယ်ကူသော်လည်းအခြားသူတစ် ဦး (ဥပမာ၊ သင့်ကလေးသို့မဟုတ်မိဘ၏မွေးနေ့) ကိုမှတ်မိရန်ခက်ခဲသည့်နံပါတ်လေးခုကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ PIN နံပါတ်အတွက် 1111 ကဲ့သို့နံပါတ်တူသည့်နံပါတ်သို့မဟုတ် 1234 ကဲ့သို့နံပါတ်များကိုမသုံးပါနှင့်။
သင်၏လေ့ကျင့်ထားသော WIC Proxy မှလွဲ၍ မည်သူ့ကိုမျှသင်၏ PIN ကိုမပေးပါနှင့်။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်ကသင်၏ PIN နံပါတ်ကိုသိပြီးသင်၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲသင်၏အစားအစာသက်သာခွင့်များကိုရရန်သင်၏ကဒ်ကိုအသုံးပြုပါကထိုသက်သာခွင့်များကိုအစားထိုးမည်မဟုတ်ပါ။
ဘယျအရာငါမှား PIN ကို ENTER IF?
သင့်ရဲ့ PIN ကိုခန့်မှန်းဖို့မကြိုးစားကြဘူး။ မှန်ကန်သော PIN နံပါတ်သတ္တမဆက်တိုက်ပါသဖြင့်ထဲသို့ဝင်မပါရှိဘူးဆိုရင်, သင့် PIN ကိုသော့ခတ်ပါလိမ့်မည်, သင်ကသင်၏ PIN ကို reset ရန်သင့်ဆေးခန်းမှပြန်လာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ PIN ကိုခန့်မှန်းနှင့်သင့်အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်ကို အသုံးပြု. ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်ပြုမိသည်။
WHAT ကိုငါ MY PIN နံပါတ်မေ့လျှင်?
ဝိသေသလက္ခဏာများ၏အထောက်အထားနှင့်အတူဆေးခန်းပြန်သွားနှင့်သင်က reset နိုင်ပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကျွနု်ပ် PIN ကို OUT တွေ့ရှိတယ်ဆိုရင်ငါဘာလုပ်သင့်သလဲ
တစ်စုံတစ်ဦးကပြုလုပ်ရှိသည်မဟုတ်သင့်တယ်တော်မူသောသင်တို့ PIN နံပါတ်ရှိပါကချက်ချင်းသင့်ရဲ့ဆေးခန်းကိုခေါ်ပါ။
သငျသညျအဖြစ်မကြာမီသင်ဆေးခန်းထားခဲ့ပါအဖြစ်သင့်လက်ရှိလအကျိုးကျေးဇူးများကိုသုံးနိုင်သည်။ အနာဂတ်လအကျိုးကျေးဇူးများကို 12 မှာတစ်လ၏ပထမဦးဆုံးပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်: 01am ။ လစဉ်အကျိုးခံစားခွင့် 11 မှာသက်တမ်းကုန်ဆုံး: လ၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင် 59pm ။
ငါဘယ်လိုအကြိုးရယူပါ BALANCE KNOW မလဲ
တိုင်းဝယ်ယူထံမှလက်ခံရရှိလက်ရှိလချိန်ခွင်လျှာပြသထားတယ်။ သင်သည်သင်၏လက်ခံရရှိရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်ဆေးခန်းမှပြန်လာသို့မဟုတ်သင်တို့အဘို့အချိန်ခွင် print ထုတ်မှစတိုးဆိုင်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။
ဘယျအရာ MY ကဒ်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ IF?
သက်သာခွင့်များကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုကြသည်ပြီးနောက်ကျွန်မ MY ကတ်ဘာလုပ်သင့်သလဲ
သင့်ရဲ့ eWIC ကဒ် Save! သင်၏နောက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတူတူ eWIC ကဒ်နှင့်အတူဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။
သင်၏ဆေးခန်းကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။ ကဒ်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်အခိုးခံရခြင်းရှိပါကကဒ်ပြားကို (၅) ရက်အကြာတွင်အစားထိုးကဒ်ကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်နဲ့အတူစျေးဝယ်
သင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်နှင့်အတူဝယ်ယူလျက်ရှိအစားအစာများကိုသင့်ရဲ့ WIC အကျိုးအတွက်ချိန်ခွင်လျှာပေါ်တွင်ထည့်သွင်းထားရပါမည်။
မည်သည့်အစားအစာများကို scan ဖတ်နေကြတယ်မီ, သငျသညျတခု eWIC ကဒ်ကိုအသုံးပြုနေငွေရှင်းကောင်တာတွင်ပြောပြပါ။
ကဒ်စာဖတ်သူသို့သင့်ကဒ်ထည့်ပါနှင့်လမ်းညွန်လိုက်နာပါ။ အဆိုပါစနစ်သည်သင့်ရဲ့ PIN ကိုရိုက်ထည့်ရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။
ငွေကိုင်သည် WIC ၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိရန်နှင့်သင်၏မိသားစုအကျိုးခံစားခွင့်များအတွင်းပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးသည်။
သငျသညျယ်ယူသောအစားအစာများကိုသင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်ကနေဖယ်ရှားသွားမည်ဖြစ်ပြီးသင်နှင့်ကျန်ရှိသောဘာကိုပြသတဲ့အကျိုးကျေးဇူးချိန်ခွင်လျှာလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။